Le webhusayithi iqhutywa yingcali yeTabex. Kuyo yonke indawo, amagama athi "thina", "thina" kunye no "wethu" abhekisa kwingcali yeTabex. Ingcali yeTabex ibonelela ngale webhusayithi, kubandakanya lonke ulwazi, izixhobo kunye neenkonzo ezifumanekayo kule ndawo kuwe, msebenzisi, ezimiselweyo ngokwamkelwa kwayo yonke imigaqo, imiqathango, imigaqo-nkqubo kunye nezaziso ezichazwe apha.
Sigcina ilungelo lokunqaba nayiphi na i-oda osibekayo nathi. Sinokuthi, ngokwengqiqo yethu kuphela, sinciphise okanye sikhuphe inani elithengiweyo kumntu ngamnye, nganye kwikhaya okanye ngomyalelo. Ezi zithintelo zingabandakanya iilawulwe zibekwe okanye phantsi kwekhawunti enye yamakhasimende, enye ikhadi lekhredithi, kunye / okanye i-oda ezisebenzisa enye idilesi yokuthengisa kunye / okanye yokuthumela. Kwimeko apho senza utshintsho okanye sikhoxise umyalelo, sinokuzama ukukwazisa ngokuqhagamshelana ne-imeyile kunye / okanye idilesi yebhidi / inombolo yefowuni enikezwe ngexesha lo myalelo wenziwe. Sigcina ilungelo lokunciphisa okanye ukuvalela i-oda, ekugwebeni kwethu kuphela, kubonakala ngathi ifakwe ngabadayisi, abathengisi okanye abahambisa.
Uyavuma ukuba amazwana akho awayikuphulaphula nayiphi na ilungelo lalo naluphi na umntu wesithathu, kuquka i-copyright, uphawu lokuthengisa, ubumfihlo, ubuntu okanye elinye ilungelo lomntu okanye ilungelo. Uyavuma kwakhona ukuba izimvo zakho aziyi kuqukumbela okanye zingekho mthethweni, zixhaphaze okanye zihlaziye okanye ziqulethe nayiphi na intsholongwane yekhompyutheni okanye enye i-malware engayichaphazela nayiphi indlela ukusebenza kweNkonzo okanye nayiphi na i-website ehambelana nayo. Ungeke usebenzise idilesi ye-imeyile engamanga, uzenza ngathi ungomnye ngaphandle kwakho, okanye mhlawumbi ukhohlise okanye amaqela asithathu malunga nemvelaphi yazo naziphi na izimvo. Unembopheleleko yedwa naziphi na izimvo ozenzayo kunye nokuchaneka kwazo. Asiyi kuthatha uxanduva kwaye asiyi kuthatha uxanduva malunga naliphi na izimvo ezithunyelwe nguwe okanye nawuphi na umntu wesithathu.
Akukho tyala liyakuba yingcali yeTabex, abalawuli bethu, amagosa, abasebenzi, abaxhasi, iiarhente, iikontraki, abafundi abasafundayo, abathengisi, abanikezeli beenkonzo okanye abaniki layisenisi baya kuba noxanduva lwako nakuphi na ukwenzakala, ilahleko, ibango, okanye nakuphi na ngokuthe ngqo, ngokungathanga ngqo, okusohlwaya, okhethekileyo, okanye iziphumo ezilandelwayo zalo naluphi na uhlobo, kubandakanya, ngaphandle komda inzuzo elahlekileyo, ilahleko yengeniso, ukulahleka kolwazi, ukulahleka kwedatha, iindleko zokutshintsha, okanye nawuphi na umonakalo ofanayo, nokuba usekwe kwisivumelwano, ukungakhathali (kubandakanya ukungakhathali), uxanduva olungqongqo okanye enye into, evela ukusebenzisa kwakho nayiphi na inkonzo okanye nayiphi na imveliso ethengwe usebenzisa inkonzo, okanye nayiphi na ibango elinxulumene nayo nayiphi na indlela ekusebenziseni kwakho inkonzo okanye nayiphi na imveliso, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, naziphi na iimpazamo okanye izinto ezishiyiweyo kuwo nawuphi na umxholo, okanye nakuphi na ukulahleka okanye ukonakala kwalo naluphi na uhlobo olwenziwe kukusetyenziswa kwenkonzo okanye nasiphi na isiqulatho (okanye imveliso) ethunyelwe, ehanjisiweyo, okanye eyenye efumanekayo ngenkonzo, nokuba icetyisiwe malunga nokwenzeka kwayo. Ngenxa yokuba amanye amazwe okanye amagunya engakuvumeli ukubekelwa ecaleni okanye ukunciphisa umda woxanduva ngenxa yesiphumo okanye umonakalo owenzekileyo, kula mazwe okanye kwimimandla, uxanduva lwethu luya kuncitshiswa ukuya kuthi ga kwinqanaba elivunyelwe ngumthetho.
Uyavuma ukukhusela, ukukhusela nokubamba i-Tabex Expert engenabungozi kunye nomzali wethu, iinkxaso-mali, amahlakani, amaqabane, amagosa, abalawuli, iiarhente, iikontraki, abaniki layisenisi, ababoneleli beenkonzo, oosomashishini abancinci, abanikezeli, abafundi abasafundayo kunye nabasebenzi, abangenabungozi kulo naliphi na ibango okanye ibango, kubandakanya imirhumo yamagqwetha afanelekileyo, enziwe nanguwuphi na umntu wesithathu ngenxa okanye yokwaphula kwakho le Migaqo yeNkonzo okanye amaxwebhu abandakanya ukubhekiswa kuwo, okanye ukwaphula kwakho nawuphi na umthetho okanye amalungelo eqela lesithathu.
Le Migaqo yeNkonzo kunye nazo naziphi na izivumelwano ezahlukileyo ekubonelela ngazo ngeeNkonzo ziya kulawulwa kwaye zithatyathwe ngokwemithetho yase-Estonia.
Imibuzo malunga neMigangatho yeNkonzo kufuneka ithunyelwe kuthi [imeyile ikhuselwe]